သင့်အတွက်I.Tနည်းပညာ နှင့် PC Games များ: photoshop အပိုင်း(၁၂)
သင့်အတွက်I.Tနည်းပညာ နှင့် PC Games များ
photoshop နဲ့ကောင်မလေးကျောကို ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးကြည့်မယ် သယ်ချင်းတို့
အခု သင်ခန်းစာက မိန်းကလေးတက်တူးမှမဟုတ်ပါဘူး .. တက်တူးထိုးနည်းသင်ပေးတာပါ ... နည်းစနစ်ကတော့တူတူပါပဲ .. ကိုယ့်ခန္ဒာမှာ တက်တူးထိုးရင် ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲ .. စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လို့ရတာပေါ .. စကြရအောင် ..အခုတက်တူးထိုးမယ့် ကောင်မလေးပုံကို ဖွင့်လိုက်ပါမယ် ...
ပြီးရင် တက်တူးပုံကိုလည်း ထပ်ဖွင့်ပါမယ် ...
ပြီးရင် Ctrl+A နှိပ် ပြီး Ctrl+C ကိုနှိပ်လိုက်ပါ နဂါးပုံမှာလုပ်ရမှာပါ
ပြီးရင် Ctrl+Tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ မိန်းကလေးပုံကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ... Ctrl + V နှိပ်လိုက်ပါ .. ဒါဆို . ခုလိုမျိုးဖြစ်လာပါမယ် ..
နဂါးပုံ layer ကို ပဲ select ပေးပြီး Blend Mode မှာ Multiply လို့ပြင်လိုက်ပါ ..
ပြီးသွားရင် နဂါးပုံက ကြီးနေလို့ .. သေးပါမယ် .. Edit Menu / Free Transform ကိုရွေးလိုက်ပါ .... သို့မဟုတ် Ctrl+T ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ပြီးတော နဂါးပုံကိုသေးလိုက်မှာပေါ့နော် .. ( Alt+Mouse Wheel = Zoom In/out )
ပြီးသွားရင် အဆင်ပြေသလိုလှည့်လိုက်မှာပေါ့ ..
အဲ့ဒီ Ctrl+T ( Free Transform ) ၀င်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ .. Right Click ထောက်ပြီး Warp ကိုရွေးပြီး .. လိုသလို ညှိပါ ... ပုံက ပြန့်ကြီးတော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲဗျာ .. ဒါကြောင့် နည်းနည်းရွဲ့ပေးရမှာပေါ့ ...
အဆင်ပြေသွားပြီဆို Enter ပါ ဒါဆို Grid တွေပျောက်သွားမှာပေါ့ ....ဒါပေမယ့် ဒါက အကြမ်းဖျင်းပဲရှိ ပါသေး တယ် .. ပိုသေသပ်အောင် Liquify နဲ့ သေသေချာချာလုပ်ပါမယ် .. ကျောကုံးနေရာလေးတွေ က ဖောင်းနေရမှာမဟုတ်လားဗျ .. ဒါကြောင့် Liquify ကိုသုံးပါမယ် .. ( Liquify ဆိုတာ ပုံတွေကို လက်နဲ့တွန်းသလိုမျိုးလေး ဆွဲ့ဆန့်ဆွဲထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဗျ ။
မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းတွေ ပြင်တဲ့နေရာမှာလည်း သုံးလေ့ရှိတယ်.. နှာခေါင်းလေးတွေ ကြီးအောင်တို့ .. မေးရိုးကားတာလေးတွေ သွယ်အောင်တို့ .. အဲ့လိုလည်းသုံးလေ့ရှိတယ် ... )ကဲ ဒါဆို အခု Liquify လုပ်ဖို့ .. Filter Menu / Liquify ကိုသွားပါမယ် ...
ဒါဆို နောက်ထပ် ၀င်းဒိုးဘောက်စ်လေးထပ်ပေါ်လာမှာပါ .. အောက်မှာပြထားတဲ့ setting လေးတွေ အတိုင်းလုပ်ရမှာပါ ..လက်တွန်းတဲ့ပုံလေး ရွေးခဲ့တာက .. နဂါးပုံကို လက်နဲ့တွန်းပြီး လူအရေးပြားပေါ်မှာ ကပ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် ဖန်တီးမလို့ပါ ။
show backdrop မှာ on ပြီး Background ပြောင်းတာက show back drop ဖြုတ်ထားရင် .. ကိုယ် select ပေးထားတဲ့ layer ( နဂါးပုံပဲမြင်ရတော့ ) ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ On ထားတာပါ
Background ပေးထားတာကတော့ .. Background ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးပုံကို မြင်ပဲမြင်ချင်တယ် လက်နဲ့ တွန်းရင် မပါချင်လို့ .. Background လို့ပေးထားတာပါခင်ဗျာ ... ( လုပ်ရင်းနားလည်သွားပါလိမ့်မယ် ၊ ထပ်သိချင်စမ်းကြည့်ပါ )
အခုအောက်ကပုံဆိုရင် နည်းနည်းရွဲ့သွားပါပြီ .. ကျွန်တော်လုပ်ထည့်လိုက်လို့ .. Brush Size ကို လိုသလိုသုံးသွားပါတယ် .. Brush Size ကြီးရင် .. ကိုယ်တွန်းတဲ့နေရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပြီး .. နေရာကျဉ်းကျဥ်းလေးတွေ ကြားထဲ တွန်းမယ်ဆိုရင်တော့ Brush Size သေးသေးနဲ့ လုပ်ရမှာပေါ့ ...
အခုလိုမျိုးလေး ကြည့်ကောင်းလာပြီဆို OK နှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါ ... မလိုတဲ့နေရာလေးတွေကို Eraser Tool နဲ့ဖျက်ပါတော့မယ် .. setting လေးကအောက်ကအတိုင်းပေါ့ ...
နောက်ဆုံးဖျက်ပြီးသွားရင် Opacity ကို လည်း အဆင်ပြေသလိုလျှော့လိုက်ပါ ..ကျွန်တော်ကတော့ 70 ထားလိုက်ပါတယ် ဆေးမင်ကြောင်က အရမ်းထင်းနေရင် မတူပဲ နေပါလိမ့်မယ် .. နည်းနည်းတော့ လျှော့ပေါ့ဗျာ .. ဒါဆို အောက်ကပုံလေးလို ရလာပါမယ် .. Final Result လေးပါ ... အဆင်ပြေကြပါစေ ...
Posted by aungminhtet at 1:44 AM
windows 8 32 or 64 bit download click here image
windows 8 activator download click here image
Antivirus software များ (5)
AotoCAD for you (2)
dictionary softwareများ (3)
ISO BURN softwareများ (6)
potoshop softwareများ (35)
promramming for you (5)
USB အပိုင်း (3)
windows isoခွေများ (18)
windows loader (3)
winRar softwareနှင့်အသုံးပြုနည်း (4)
zawgyi fontပြသနာများ (7)
Blog Archive September (2) October (4) November (98) December (198) January (89) February (86) March (46) April (26) June (43) July (11) August (25) September (4) December (11) February (1)
သင့်အတွက်Software All Free